Isbarbardhiga ArcGIS iyo Manifold GIS - Geofumadas
Maarso, 2009 ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah
Waa shaqo kaliya titanic ah in user Manifold loo magacaabo Tomasfa ayaa sameeyey iyo in kor u kacay ku aaddan golaha qalabkaas. Waxay i xasuusinaysaa shaqadaas uu qabtay Arthur J. Lembo markuu qabtay hawl aad u nidaamsan sida loo sameeyo leh ArcGIS iyo Manifold isla nidaamkii hore. In ka badan dareenka isbarbardhigga, tirada ficillada lagu kala saaray mowduuca ayaa soo jiitay dareenkeyga, taas oo ah dukumiinti aad u waxbarasho badan oo lagu sameeyo isbarbardhiga aaladaha GIS marka la sameynayo go'aan.
Isbarbardhiggu wuxuu ku saleysan yahay jaantus kala sooca isdhexgalka iyadoo loo adeegsanayo howlaha caadiga ah, ogow, kuma saleysna howlaha joogtada ah ee Manifold sameeyo laakiin kuwa arcGIS, markaa waa la aqoonsanayaa haddii ay sameeyeen ArcReader, ArcView, ArcEditor ama ArcInfo. Midigta waxaa lagu muujiyay in Manifold GIS sameeyo iyo in kale.
Fikradaha madashu waa eex iyo xoogaa firqooyin ah, taas oo aan layaab aheyn maadaama ay tahay gole codsi gaar ah leh isla markaana waa dhici laheyd haddii gogosha ay ahaan laheyd tartanka. Sidoo kale waa faa'iido in la fahmo qaar ka mid ah falsafada horumariyeyaasha Manifold.
Shaqadan waxaan arkayaa ugu yaraan shidaalkan:
Qor jadwalka codsiga GIS
Liiska meelaha laga tixgelinayo codsiga GIS
Isbarbar dhigo waxa ArcReader la sameeyo ArcView, ArcEditor iyo ArcInfo
Isbarbardhig ArcGIS la Manifold
Ugudambeyn, dukumiintiga ma ahan mid la isku fahmi karo maxaa yeelay wuxuu diirada saarayaa sameynta isbarbardhiga la filayo inuu u adeego go'aan sameynta. Dabcan, isbarbardhigga hal-hal-ma ahan mid aad u fudud, gaar ahaan maaddaama ArcGIS ay ku saleysan tahay a qalabka aasaasiga ah iyo kuwo badan kordhin ama noocyo gaar ah oo ku jihaysan niches kala duwan. In kasta oo Manifold uu yahay aalad iskudayeysa inay sameyso jadwalka ay isticmaalaan dadka isticmaala GIS, hal aalad (in kastoo waxay leedahay maskax ahaan) waxyaabo badan oo sameeya ballaadhinta ArcGIS kuma koobna iyaga, laakiin waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabahaas ArcGIS waxay ka badan tahay waxa ay ku sameeyaan dhamaanba kordhinta iyo ka sarraysa dhamaan qiimaha aad u hooseeya.
Halkan aan ka tago liiska u muuqataa weyn, waxaa kaliya oo madax u ah mid kasta oo ka mid ah, kuwaas oo joogtada ka badan hawlaha 1,100 oo aan lumin macnaha asalka ah inaan uga tago in English.
USA Wadada (StreetMap ™ USA)
Muuqaalka Warbixinta Wareega
Qaybaha Macluumaadka Wajiga Xogta
Muujinta Xogta Raster
Muuqaalka Raster: Xogta Rampal Color Rampal-Qaadashada Algorithms
Muuqaalka Routing Display Resample
Hababka Iskujira Qiyaasaha Raster
Muuqaalka Calaamadaha Raster
Noocyada Multipart (Point, Line, iyo Multigree)
Muujinta Khariidadda inta Lagu Horto
Beddelka Macluumaadka Wareega
Isku xirka Joometiriga (COGO)
Editing Editing and Vectorization
Wareeysi Dhammaan Hababka Raster Taageerada ArcGIS
Naqshadaynta Nalalka ah
Xulashada Raster Cell
Deegaanka Raster Cleanup
Qalabka Rinjiga Nadiifinta Raster
Mobile - Integration GPS
Qodobo badan oo loo yaqaan 'Geodatabase Geodatabase Editing'
Editing Gaabnaanta Gaaban
Goobjoogeyaal Goobjoogayaal ah
Muuqaal iyo su'aal
Qaybaha kala duwan ee loo yaqaan "Geodatabases"
Joojinta Jareeynta Geoprocessing
Goobaha loo yaqaan Geodatabases Geoprocessing
Xogta Muuqaalka Sawirrada Muuqaalka (Muuqaalka)
Keydso Macluumaadka Tixraaca Daroogada
Raadi macluumaadka GIS
Maamul Macluumaadka Ceymiska
Is-beddelka Dukumiintiga Dibedda / Dibadda
Abuuri iyo Xakamee Xirfadaha u dhexeeya Naqshadaha
Habdhaqanka Cilaaqaadka Geodatabase
Fasalka Xiriirka Geoprocessing
Xadgudubka Xeerka Korjoogteynta Geodatabase
Maareynta Qodobka Geodatabase
Xeerarka Wadaagga ee Geodatabase
Falanqaynta Shabakada Iskuduwaha
Xeerarka Xiriirinta Shabakada Joomatiga
Editing Geometric Network
Tilmaamaha tooska ah (Wadooyinka)
Eeg Metadata Isticmaalka Noocyo kala duwan
Qaababka Isdhexgalka ah
Jawaabaadka Taageerada Baraneysa
Maareynta Xogta Guud
Maareynta Fasalka Habboon
Saadaalinta iyo Isbedelka
Is beddelka Raster
Isbeddel Raster / Muuqaal
Lakabyada iyo Jadwalka Muuqaalka
Falanqaynta Muhiimka ah
Qalabaha Isticmaalka Tirakoobiyada - Falanqaynta Qaababka
Kooxaha Isticmaalka Qalabka Isticmaalka Muuqaalka
Qalabka tirakoobka alaamka-qiyaasidda qaybinta joqraafiga
Falanqaynta Istiraatiijiyadeedka Mabaadiida-Mabaadiida Xidhiidhka Muuqaalka
Qalabka tirakoobka alaabada
Qalabka Tirakoobka Isticmaalka Muuqaalka
Qalabka Waxyaabaha badan
Maareynta Macaamiisha ArcGIS
Inkasta oo shaqada la dhammeeyo si wada jir ah oo ay isticmaalaan isticmaalayaasha forum, halkan waxaad ka soo dejisan kartaa fayl dhamaystiran
Post Previous" Hore GIS Manifold oo abuuraya layliyo daabacan
Post Next Maalin murugo leh nolosha GeofumadasNext »